कास्की जेलमा ‘सेक्स’ फेसिलिटी, याैन सम्पर्कपछि हाेटलबाटै भागे कैदी ! अस्पतालबाट भागेको नाटक « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
कास्की जेलमा ‘सेक्स’ फेसिलिटी, याैन सम्पर्कपछि हाेटलबाटै भागे कैदी ! अस्पतालबाट भागेको नाटक
ओएस नेपाल, पोखरा, १४ मङ्सिर । उपचार गर्न लगिएका कास्की कारागारका कैदी पुष्कर खड्का अस्पतालबाट भागे । केही दिनअघि यस्तै खबर सहरमा फैलियो ।
तर उनी अस्पतालबाट नभई होटलबाट भागेको पत्ता लागेको छ । स्रोत भन्छ, ‘अस्पतालमा उपचारका लागि नभई उनलाई युवती भेट्ने मौका दिन होटल पुर्‍याइएको थियो ।’
दाँतको उपचार गर्न भनी प्रहरीले लैजाँदा खड्का गण्डकी शिक्षण अस्पतालको चर्पीबाट भागेको कास्की कारागारले बताएको थियो । तर स्रोतका अनुसार उनलाई यौनतृष्णा मेट्ने मौका दिन मंसिर ९ गते न्युरोडको होटल दीपसागर पुर्‍याइएकोमा त्यहींबाट भागेका थिए । कारागार सुरक्षामा नेपाल प्रहरी खटिएको हुन्छ ।
तर कैदीलाई उपचारका लागि बाहिर ल्याउने वा नल्याउने अधिकार कारागार प्रशासनसँग हुने प्रावधान कारागार व्यवस्था ऐनमा छ । जेल प्रशासनसँग अनुमति लिएरमात्रै प्रहरीले कैदीलाई बाहिर निकाल्ने र सुरक्षाकर्मी खटाउँछ । खड्का भागेपछि कास्की कारागार प्रमुख हरिप्रसाद गौतमले खड्का अस्पतालबाट भागेको ‘कहानी’ मिडियाकर्मीलाई सुनाएका थिए ।
कपिलको अहिलेको यस्तो हालत देखेर रोईन् भारती, यस्तो अवस्थामा रहेछन् कपिल !
OSNepal, Kathmandu, 12th April: Everybody goes through highs and lows..
काठमाडौँ, २९ चैत । डोल्पाको जुफाल विमानस्थललाई रंगशाला बनाइएको छ।..
Bayern Munich Reach Semi Finals After Goalless Draw With 10 Man Sevilla
OSNepal, Kathmandu, 12th April: Bayern Munich ground outa0-0 draw..
Know About New Miss Nepal Shrinkhala Khatiwada
OSNepal, Kathmandu, 12th April: Shrinkhala Khatiwada was crowned Miss Nepal World..
तब्र गतिमा रहेको जीप नवलपरासीको बुटिङ्गटारमा पल्टियो, एकजनाको मृत्यु आठजना घाइते
नवलपरासी, चैत २९ – नवलपरासीको बुटिङ्गटार सिमार्दी भञ्ज्याङ्गमा जीपपल्टिदा एकजनाको..
‘Magne Budha’ Cried On His Birthday Remembering Mother
OSNepal, Kathmandu, 12th April: Kedar Ghimire, commonly known as Magne Budo..